3 မည်သည့် web application အတွက်မဆိုလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ | Martech Zone
3 မည်သည့် Web Application အတွက်မဆိုလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 1, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ငါပိုပိုပြီး, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောင်းချသူနှင့်ကုမ္ပဏီများသည်တူညီသောမေးခွန်းများကိုထပ်ခါတလဲလဲတောင်းဆိုနေတာရှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုတည်ဆောက်ရန်စဉ်းစားနေပါက၎င်းသည်ဤအရင်းအမြစ် ၃ ခုသည်နောက်မှသင်အရင်းအမြစ်များကိုချွေတာလိုပါကသင်၏လျှောက်လွှာတွင်တစ်ရက်မှထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
တစ်ခုရှိ API ကို? ၎င်းသည်အထူးသို့မဟုတ် web ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမလိုအပ်ပါ။ မည်သည့် ol 'plain XML ကိုမဆိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်နည်းပညာများစွာရှိခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တစ်နေ့နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာတွင်ပေါင်းစည်းချင်သည်။ ယနေ့ငါလျှောက်လွှာကိုစဖွင့်လျှင်၊ API ကို အပြင်၊ User Interface ကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါ၊ API ကို ငါတို့သေချာအောင်တည်ဆောက်နိုင်ပြီ။
တစ် ဦး အေဂျင်စီအင်္ဂါရပ်ရှိသည်? ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုသင်၏လျှောက်လွှာသို့ရောင်းလိုသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့စီမံခန့်ခွဲလိုသည်။ ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့် - Domain မှတ်ပုံတင်သူများတွင်ဒိုမိန်းပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖောက်သည်များကထိန်းသိမ်းထားနိုင်သောအေဂျင်စီအကောင့်များမရှိသော်လည်း၊ အေဂျင်စီသည်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည် ... မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပင်ငွေပေးချေနိုင်သည်။ ငါဒီညငါ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်သူကိုရေးခဲ့တယ်။
တစ် ဦး လုပ်ငန်းအင်္ဂါရပ်ရှိသည်? ကုမ္ပဏီများ ပို၍ များများသည်သေးငယ်သည့်စုဆောင်းမှုများသာဖြစ်သည်။ သတင်းပို့ခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အဆင့်အနေဖြင့်စုစည်းသင့်သည်။ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှသမ္မတ VP မှ ... လူတိုင်းသည် ၀ င်ရောက်ခွင့်ရရန်ခွင့်ပြုချက်ရရှိနိုင်ရမည်။
သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်ကိုအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များအမြဲလိုအပ်သည်။ သို့သော်၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောလိုအပ်ချက်များကိုမကြာခဏသတိမမူမိကြပါ။ သင်၏ကုမ္ပဏီဆော့ဖ်ဝဲကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်နောက်ကျသောနေရာများတွင်ဖုန်မှုန့်များစုဆောင်းတတ်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Web 2+ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရန်ပုံငွေပံ့ပိုးသော Venture အရင်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်အနည်းဆုံးဤအင်္ဂါရပ်များကိုစီစဉ်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်၏ပိုက်ဆံများကိုအခြားနေရာများတွင်ယူမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါအလားအလာရှိတယ်ဆိုရင်ငါမကြာခဏလုပ်ပါ။
Tags: code ကိုဒီဇိုင်း infographicsသြဇာကိုရှာပါဖောင့်+ googleiframeiframe အနိုင်အထက်စီမံကိန်း template ကိုကဗျာwordpress ကိုရဲ့ login
2:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 46
2:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 48
ငါအေဂျင်စီ Feature ကိုလုံးဝကိုချစ်လိမ့်မယ်။ ငါဒိုမိန်းအမြောက်အများကိုထိန်းသိမ်းပြီးအမှန်တကယ်ဒိုမိန်းကိုကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်အမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းသိလိုသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့အတွက်ဒိုမိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ ၁၀၀% ထိန်းချုပ်နိုင်သေးသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများက ၄ င်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဆိုးရွားလာပါကအတိုင်ပင်ခံများသည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းအမည်ဖြင့်шантажနိုင်မည်ကိုကြောက်ရွံ့မှုအားဖယ်ရှားပေးသကဲ့သို့ဖောက်သည်များသည်၎င်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
2:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 58
၁၀၀% သည် API နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင် Doug နှင့်သဘောတူသည်။ နှင့်အေဂျင်စီ feature ကို ... Excelent စိတ်ကူး! ။ ဝဘ်လျှောက်လွှာ = အနာဂတ်